Fitateram-bahoaka : olana ho an’ny mpandeha sy ho an’ny mpitatitra | NewsMada
Fitateram-bahoaka : olana ho an’ny mpandeha sy ho an’ny mpitatitra
Olana iray lehibe eto Antananarivo sy ny manodidina ny fitateram-bahoaka, antoka iray mampirindra ny asa sy ny fiainanana andavandron’ny mponina. Olana tany amin’ny taona 2010 nitombo avo telo heny amin’izao fotoana izao. Mihabetsaka ny mponina, tsy mifanaraka amin’izay ny misy ny toeram-piasana, ny lalana, ny fiara miasa. Tompon’an­draikitra miaraka ny minisiteran’ny misahana ny fitaterana, ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) sy ny kaominina manodidina, ny fivondronan’ireo kaoperativa mpitatitra (UCTU).
Kaoperativa 58 mivondrona ao amin’ny UCTU, mampiasa zotra 74. Tsy mifandanja ny isan’ny fiara mpitatitra sy ny habeny mampiasa ireo zotra ireo. Zotra sasany, efa tsy ahitana fiara kely intsony (minibus) intsony, ny hafa mbola misy. Raha ny salanisa, zotra iray mampiasa fiara miisa 33, ny zotra hafa tsy ahitana fiara afa-tsy 12. Tsy mifanaraka amin’ny filàn’ny mpandeha ny isan’ny fiara miasa, na be loatra indray amina zotra sasany. Miteraka olana ho an’ny mpandeha izay tsy fifandanjana izay.
Amin’ny ankapobeny tsy voahaja ny bokin’andraikitra. Ny fahanteran’ny fiara, 65 % mihoatra ny 20 taona niasana, fa maro ihany koa ireo fiara minibus Mercedes, efa niasa avy any ivelany. Olana lehibe indrindra ho an’ny mpandeha sy ny mpitatitra ny fitohanan’ny fifamoivoizana. Raha zotra iray tany amin’ny 10 taona lasa, nahavita mandroso sy miverina 16, ankehitriny, latsaky ny 10. Miankina amin’ny halaviran-dalana sy ny fahara­tsian’ny lalana.
Miteraka fatiantoka goavana eo amin’ny toekarena ny ora lany amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana : mampihena ny ora fiasana sy ny vola miditra amin’ny mpitatitra. Antony lehibe fifanenjehana eo amin’ny samy mpitatitra. Ny mpamily sy mpanampy azy, ma­nenjika ny vola tsy maintsy arotsaka ho an’ny tompon’ny fiara, ambonin’izay vao azy ireo. Tsy misy karama raikitra eo amin’ny fitateram-bahoaka, tsy misy fiahiana ara-tsosialy (ny maro mba tsy ilazana izy rehetra). Midika izany fa tsy misy fidiram-bola ireo mpamily sy ny mpanampy azy amin’ izao fihibohana izao.